मिजासको 'अर्थ अवतरण': नयाँ विचारको अवतरण | samakalinsahitya.com
मिजासको 'अर्थ अवतरण': नयाँ विचारको अवतरण
ढुंङ्गेसाँघु ताप्लेजुङ्गबाट २०५४ सालतिर उभार मासिक साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन गरी नेपाली साहित्य र पत्रकारीतामा सार्वजनिक भएको नाम हो मिजास तेम्बे । उनले २०५५–२०५६ सालमा ईटहरीबाट उत्साह त्रैमासीक पत्रिकाको सम्पादन गरे । त्यो बेला देखी नै मिजासले खाली ठाउँहरु खोजीरहे । खाली ठाउँ खोजी रहँदा रहँदै २०५६ सालमा पहिचानवादसंगै पहिचान त्रैमासीक पत्रिकाको जन्म गराए उनले । पहिचान त्रैमासिक पहिचानवादको मुख पत्र थियो । उनि थिए प्रधान सम्पादक ।
स्रष्टा आाफूले आफैलाई चिनौ, भन्ने आग्रह र जीकिर थियो पहिचानवादको । जब , आाफैले आफैलाई चिन्न सकिन्छ , अनि मात्र एउटा स्रष्टाले एउटा स्पष्ट विचारको विकाश गर्न सक्छ । त्यस पछि मात्र एउटा स्रष्टाले राम्रो सृजना जन्माउन सक्छ भन्ने बुझाई थियो मिजासको । यसरी उनले साहित्यको क्षेत्रमा केहि नयाँ विचारहरुको प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । प्यास नजरको गजल संग्रह , सीमाहीन विम्बहरु संयुत्त कविता संग्रह सम्पादन , उद्गार गीती एल्बम , ग्रिनवीचका प्रतिध्वनिहरु संयुत्त कविता संग्रह सम्पादन गरी अर्थ अवतरण कविता संग्रह सम्म आई पुगेका छन् उनि ।
मान्छेले हरेक क्षेत्रमा संघर्षको बाटोबाट चेतना प्राप्त गर्दछ । त्यहि चेतनाले मान्छेलाई पक्का मान्छे बनाउँछ । साहित्यको क्षेत्रमा संघर्षको बाटोबाटै कवि मिजास तेम्बे यतिवेला अर्थ अवतरण सम्म आई पुगेका हुन् । उनका सृजनाहरुलाई हामीले राम्ररी पढ्नु पर्ने र बुझ्नु पर्ने भएको छ, जस्तो लाग्छ ।
कविता संग्रह अर्थ अवतरण नयाँ विचारलाई बोकेर त्यो विचारलाई अवतरण गाउन हामी माझ आईपुगेको छ । कसरी अर्थहरुलाई अवतरण गराउन खोजेका छन् त उनले ? कवितांश हेरौं........
समयले मान्छलेलार्ई घिस्याइरहछ ?
– चिन्तन गरिरहेछु
एकछिन पर्ख ¤
समय, मान्छे र म
जीवन र जगतलाई टाढावाट नहेरेर नजिकवाट हेर्नु पर्छ । खाली ठाउँहरुवाट बोल्नु पर्छ । यो मानव जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । शब्दका रसायनहरुलाई बुझेर, शब्दको बहुआयामिकता अथवा शक्तिलाई चिन्न सक्यो भने मात्र अभिप्रायहरुको जागरण हुन सक्दछ । लेखनका क्षेत्रमा यस्ता खाले चिन्तनहरु माथि चिन्तन गर्नु पर्ने बेला छ । भिड्हरुमा पाइला राख्नको लागि खाली ठाउँ चाहिन्छ, भिड्हरुमा भिड् थपिनको लागि पनि खाली ठाउँमै टेक्नु पर्दछ । खाली ठाउँ उस्को धरातल हो । त्यहि धरातलमा उस्ले शत्तिशाली सृजनाहरु गर्न सक्दछ । जुन स्रष्टाले कुनै पनि बस्तुलाई नबिनतम चेतनाले बुझ्दछ र त्यसलाई सृजनामा अभिब्यक्त गर्दछ भने उसको सृजनामा पाठकहरुले नयाँपनको आभाष पाउछन् । र यस्ता चेतनावादीय स्रष्टा र सृजनाले नै समयलाई हाक्न सक्दछ । तर जुन स्रष्टा र सृजनामा नविन सोंच र दृष्टिकोण छैन भने उस्लाई समयले घिस्याईरहेको हुन्छ । साहित्यमा मिजासले यीनै कुराहरुको प्रयोग गर्न चाहेका छन् ।
सधैँ विरोधाभाष देखिरहन्छ÷लेखिरहन्छ
सधैँ अनिर्णित बोलिरहन्छ÷खोलिरहन्छ
सधैँ अन्धाधुन्द गरिरहन्छ÷सरिरहन्छ
सधैँ बेठेगान हिँडिरहन्छ÷दौडिरहन्छ
राजनैतिक साँध–सीमाहरूले मिचिएको छ
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, मान्छेलाई विचारले र दर्शनले घुमाईरहको हुन्छ, थिचिरहेको हुन्छ । धर्म, राजनिति, साहित्य र विज्ञानको वरीपरि मान्छे हिडिरहेका हुन्छन् । यी चीजहरुलाई जस्ले नौलोचेतनाले हेर्दछ, पढ्दछ, अनि बुझ्दछ भने उ हरेक क्षेत्रमा शसक्त हुन सक्तछ । जस्ले कुनै पनि विचारलाई बुझ्न सक्दैन तर त्यस्लाई स्वीकार्न वाध्य हुन्छन् भने त्यस्तो स्रष्टाको सृजना दोधारमा वित्ने गर्दछ र अन्धा धुन्धमा अलमल गरीरहन्छ । उस्ले अस्पस्टताको साहित्यिक यात्रा गर्दछ र फेरी गरिरहन्छ । उ जुनै पनि विचारको भ्रममा पर्दछ । त्यसैले हरेक क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्नको लागि सधैं नौलो दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ । अस्पष्ट विचार, अस्पष्ट लेखले पाठकहरु र सर्बसाधारणलाई भ्रममा पार्दछ, अपुर्ण वनाउँदछ । कुनै पनि बस्तु वा घटनालाई हल्का रुप हेर्नु हुदैन । त्यसलाई वहुआयामीक चेतनाले हेर्नु पर्दछ । मिजासका कविताहरु यस्तै वैचारिक उठानहरुको नव पिरामिड हो ।
संस्कार– संस्कार– संस्कार
यी मिश्रित दर्शनहरु
झन् भmन् – भmन् झन्
विचार देखि विचार सम्म
जो कोहि मान्छेले आफ्नो पहिचान बनाउँन चाहन्छ । आफ्ना संस्कार संस्कृति, भाषा, धर्म र रितिरिवाजहरुको जगेर्ना गर्न चाहन्छन् । एका तिर मान्छेहरु यी कुराहरुको जर्गेन गरिरहेका छन् । तर यसै माथि अनेकौ धर्म, दर्शन, विज्ञान, र विचारले थिचिएर अल्प जातीहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । विज्ञानले संसारलाई सानो डेटा बेस भित्र अटाउन सक्ने बनाई सकेको छ । अर्को तिर सिंगो ब्रमाहण्डका ताराहरु ब्लेकहोलहरुमा हराई रहेका छन । दिनानु दिन पृथ्वीको आयु घटिरहेको अवस्था पनि छ । तर विज्ञानको सहयोग विना संसारका मान्छेहरु बाँच्न नसक्ने भैईसकेका छन् । अब यस्लाई गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने भैइसकेको छ ।
एकातिर विज्ञान, अर्को तिर धर्म । एकातिर ग्लोबलाइजेसन, अर्कोतिर संस्कार संस्कृतिकोे जगेर्ना । यस्ता मिश्रीत कुराहरुले मिश्रीत दर्शनहरुले, विर्निमित परम्पराहरुले आजको मान्छेलाई कम्प्लेक्सिटीको जीवन विताउन बाध्य वनाएका छन् । त्यसैले यस्ता धेरै कम्प्लेस कुराहरुलाई आजको स्रष्टाहरुले नजिक बाट बुझ्न अति आवश्यक भएको कुरा मिजासका कविताहरुले वोलीरहेको छन् ।
कहिले भेटीमा लुछाचुडाी गर्छन्
इतिहास देीख नै यहाँ
किसिम– किसिम हुँदै आएको छ
सिंगो देशको पोट्रेट उतार्न सफल भएको यो उहाँको एउटा बैशालु कविता हो । भुपरिवेष्टित हाम्रो देश नेपाल आफै रोगी, झन त्यस माथी भ्रष्टचारले हुईपाल बनाएको छ । अन्य देशका दात्री संघ संस्थालाई रिझाएर पाएका केहि सहयोगमा पनि देशका शासकहरु हड्ढिमा कुकुरहरु जुधे झै जुध्दछन् । फेरि नेपाली जनता हामी पनि यस्तै नेताहरुलाई पटक पटक निर्वाचनमा जिताएर सिंहदरबार पठाईरहेका छौ । हामीले कुरोको चुरो कहाँनेर बुझिरहेका छैनौ ? मिजासका कविताहरुले भनिरहेकै छन नी, यहाँ नेर तुस छ है तुस .......
मिजासको यस्तै अर्को कवितालाई पढौ ।
इँजार र स्वाभिमान
इँजारलाई देशका शासकहरु सम्झे हुँदोरहेछ । इँजार खुस्केर झरि सक्दा पनि लाज लाग्दैन देशका शासकहरुलाई । नैतिकता कहाँ छ ? कता हरायो ? नैतिकवान नेताले त्यो ठाउँलाई छोड्छ अथवा छोड्नु पर्छ । शाशकहरुले पाए भने २ मिनेट भए पनि जनता माथि शाशन गर्न छाड्दैनन् । यो नै फुस्किएको इँजार र नेताको पहिचान हो ।
निसाम् ! तिम्रो छात्ती पो विशाल यो एउटा उनको युद्ध कवितालई हेरौ ।
बाबा चाडै आउँदैछन्” भनेर
एउटा लडाईमा गएको सिपाहीको मन कस्तो हुन्छ ? दुस्मनसंग पनि लड्नु छ । सकेसम्म जित्नु छ । हारे पनि ज्यान जोगाउँनु छ, त्यसै वेला घर परिवारलाई पनि सम्झनु छ पाल्नु छ टाल्नु छ । यो हृदय विदारक सिपाहीको जिन्दगीले भोगीरहने वास्तविक कथाहरु हुन् । यो त हरेक सिपाहीहरुले जीवनमा भोग्छन् नै तर विश्वका ६० भन्दा धेरै देशहरुमा युद्ध लडेका गोर्खालीहरुको पहिचान कहाँ छ ? ठाउँ कहाँ छ ? किन गोर्खालीहरुको देश भन्न चाहान्दैन देशका शासकहरुले ?
अन्तमा यहाँ भन्दा धेरै नलेखौ होला , धेरै लेखे धेरै गल्ति हुन सक्छ, आवश्यक भएमा फेरी फेरी लेख्दै गरौला । नविनतम कविता कृति अर्थ अवतरण प्रकाशीत गर्नु भएकोमा उनलाई लाख बधाई !
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : आईतबार, 13 आसाढ, 2067
थलिएको गोर्खाली इतिहास र कटमेरो संझनाहरु